११ जिल्लामा निःशुल्क इन्टरनेटको अवधि सकियो, अब स्थानीय तहले नै तिर्नु पर्ने
राष्ट्रिय / सङ्घ विज्ञान / प्रविधि कोभिड-१९ अपडेट
काभ्रेसहितका ११ जिल्लामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क इन्टरनेटको अवधि सकिएको छ । अब प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको शुल्क बुझाएमामात्रै स्थानीय तहहरूकासाथै वडा कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरू तथा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूले इन्टरनेट सेवा पाउने भएकाछन् । यी तह र निकायहरूलाई दुई वर्षसम्म निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको प्राधिकरणले मङ्गलबार सूचनामार्फत शुल्क लाग्ने जानकारी दिएको हो । प्राधिकरणले भुकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, गोरखा र मकवानपुर)का इन्...
अब अनिवार्य रुपमा प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट स्पीडको जानकारी दिनुपर्ने
राष्ट्रिय / सङ्घ विज्ञान / प्रविधि
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कुन समयमा कति इन्टरनेट ब्याण्डविथ प्राप्त भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधबार उपभोक्तालाई अनिवार्य रुपमा व्याण्डविथको विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन जारी गरेको हो । पछिल्लो समय इन्टरनेट स्पीडको विषयमा प्रयोगकर्ताबाट धेरै गुनासो आउन थालेसँगै प्राधिकरणले यस्तो कदम उठाएको हो । ‘सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग गरेको सम्झौता अनुसार कुन कुन समयमा कति इन्टरनेट ब्याण्डविथ प्राप्त भइरहेको छ भन्ने विषयमा सेवाग्राहीले सजिलै बुझ्ने गरी तथा आफैले हेर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने...
युट्युब ट्रेण्डीङमा परेकाे भिडियाेमा गरिएका दावीमाथि तथ्यजाँच
विज्ञान / प्रविधि कोभिड-१९ अपडेट
हिमाल अनलाईन टिभी नामक यूट्युब च्यानलमा “पहिलो पटक विस्तृत खुलासा, जान्नुहोस् अदृश्य खेल, के हो वास्तविकता ?” शीर्षकमा मनोवैज्ञानिक भनी चिनाइएका नविन जोशीको अन्तर्वार्ता गत वैशाख २ गते शेयर गरिएको थियो । यो भिडियो दुई दिनसम्म नेपालमा ट्रेन्डिङ भएको थियो भने वैशाख ४ गते राती १२ बजे नेपालमा १४ नम्बरमा ट्रेन्डिङ रहेको थियो । विगत चार दिनमा यस भिडियोलाई १ लाख ३२ हजार पटक हेरिसकिएको छ । अन्तर्वार्तामा नविन जोशीले कोरोना भाइरससम्बन्धी थुप्रै तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । तर उनको बारेमा विस्तृत जानकारी उक्त भिडियोमा दिइएको छैन । उनी एक मनोवैज्ञानिक हुन् मात्र भनिएको छ । उनको फेसबुक पेजमा जनाइए अनुसार उन...
के राति खतरनाक रेडिएसन आउने भएर मोबाइल, ल्यापटप आदि बन्द गर्नुपर्ने हो?
अहिले फेसबुकको मेसेन्जरमा एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। भारतबाट आयातित यो भिडियोमा दावी गरिएको छ, आज राति साढे १२ बजेदेखि साढे ३ बजेसम्म खतरनाक रेडिएसन हामीहरुको घरबाट गुज्रनेछ। त्यसैले मोबाइल, ल्यापटप, टिभी आदि सबै इलेक्ट्रोनिक सामान नचलाइकन स्विच अफ गरेर राख्नू। अमेरिकाको नासाका वैज्ञानिकहरुका तर्फबाट यो खबर आएको भनेर त्यसमा दावी गरिएको छ। सुन्दै अपत्यारिलो भए पनि धेरैले ‘हो र’ भनेर उत्सुकताले, हो कि भन्ठानेर धमाधम अरुलाई सेयर गर्दै गरेको देखियो। त्यसैले यो विषयमा फ्याक्टचेक गरेका छौँ। यसरी रेडिएसन फैलिने हल्ला अहिलेमात्र हैन, बारम्बार हुँदै आइरहेको छ। तीन वर्षअघि सन् २०१७ मा चन्द्रग्रहण अगाड...
के हावामा ८ घण्टासम्म कोरोना भाइरस बाँच्छ?
सामाजिक सञ्जालमा केही दिनअघिदेखि सिएनबिसीको समाचारको स्क्रिनसटसहितको एउटा खबर भाइरल छ। त्यसमा हावाबाट कोभिड १९ सर्ने प्रमाणित भएको, भाइरस हावामा ८ घण्टा बाँच्छ भन्ने दावी गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सेयर गरेको यो स्क्रिनसट मंगलबार प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको ट्विटमा पनि देखियो। के साँच्चिकै हावामा ८ घण्टासम्म कोरोना भाइरस बाँच्छ त? हामीले गरेको फ्याक्टचेकमा देखिएका तथ्य यस्ता छन्। स्क्रिनसटमा देखिएको सिएनबिसीको समाचार गलत होइन, सही हो। सिएनबिसीले WHO considers ‘airborne precautions’ for medical staff after study shows coronavirus can survive in air शीर्षकमा समाचार पक्कै...
कोरोनाका सबै सूचना अब एउटै वेबसाइटबाट, क्वारेन्टाइनको निगरानी एप्सबाट
कोभिड–१९ को यथार्थ जानकारीबारे तपाईं अलमलमा परिरहनुभएको छ ? सामाजिक सञ्जालमा आउने फरक–फरक सूचनाले हैरानी खेपिरहनुभएको पो छ कि ? अब ढुक्क हुनुहोस् । तपाई त्यो हैरानीबाट मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ । आजदेखि कोभिड–१९ का आधिकारिक सूचना एकै ठाउँबाट जानकारी लिन सक्नुहुनेछ । सँगै मोबाइल एप्समार्फत क्वारेन्टाइन अनुगमन प्रणालीकोसमेत शुरु गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । यसलाई गृहमन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ एकीकृत सूचना प्रणाली तथा क्वारेन्टाइन अनुगमन प्रणाली’ नाम दिएको छ । यसरी सूचना प्राप्त गर्न तपाईले एउटा वेबसाइट हेर्नुपर्नेछ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आजदेखि उक...
तीनजनालाई अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान / प्रविधि
द रोयल स्वीडिस एकेडेमी अफ साइन्सेसले यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूपमा अभिजित बनर्जी, इस्थर डुफ्लो र माइकल क्रेमरलाई दिने घोषणा गरेको छ। उनीहरुलाई विश्वव्यापी गरिबी हटाउन गरिएको खोजका लागि नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ। अर्थशास्त्रतर्फ यस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नेमध्येका एक अभिजित बनर्जी भारतीय मुलका अमेरिकी अर्थशास्त्री हुन्। त्यसैगरी अभिजितकी श्रीमतीसमेत रहेकी इस्थर फ्रान्सेली नागरिक हुन् भने माइकल अमेरिकी नागरिक हुन्। इस्थर अर्थशास्त्रमा सबैभन्दा कम उमेरमा नोबेल पुरस्कार जित्ने महिला बनेकी छन्। यसका साथै अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्र...
सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाली प्रधानमन्त्री आबी अहम्मद अलीलाई प्रदान गरिने भएको छ। नर्वेको राजधानी ओस्लोमा १००औँ नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता स्वरुप आबी अहम्मदको नाम घोषणा गरिएको हो। बीबीसीका अनुसार शान्ति प्राप्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जुटाउन अलीले गरेको प्रयत्नका लागि उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने भएको हो। सन् १९९८ देखि २००० सम्म चलेको सीमा युद्धपछि २० वर्ष लामो सैनिक गतिरोध अन्त्य गर्दै इथियोपिया र इरिट्रियाबीच गत वर्ष एउटा शान्ति सम्झौता भएको थियो।
सन् २०१८ र २०१९ को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार घोषणा
सन् २०१८ को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार पोल्याण्डकी लेखिका ओल्गा टोकारजुक र सन् २०१९ को नोबेल पुरस्कार अस्ट्रियाली लेखक पिटर हान्डकेलाई प्रदान गरिने भएको छ । सन् २०१८ मा एक विवादास्पद यौनकाण्डका कारण साहित्य तर्फको नोबेल पुरस्कार वितरण गरिएको थिएन । स्वीडिस एकेडेमीका सचिव म्याट्स माल्मले स्टकहोममा दुबै पुरस्कारको घोषणा गर्नुभएको थियो । पुरस्कारका लागि आठ जनाको नाम प्रारम्भिक छनौटमा परेको र त्यसमध्ये दुई जनालाई सन् २०१८ र २०१९ का लागि पुरस्कृत गर्ने निर्णय भएको नोेबेल कमिटीका अध्यक्ष एन्डर्स ओल्सोनले बताउनुभयो । पुरस्कृत व्यक्तित्वहरुले जनही ९ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर र स्वर्ण प...
रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार एक एशियालीसहित तीन वैज्ञानिकलाई
यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जनालाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको छ । जोन बी गुडनेफ, स्टानली ह्वीटीङ्घम र अकिरा योसिनोले रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई ‘लिथियम इयोन ब्याट्री’ निर्माणमा योगदान पुर्‍याएवापत नोबल पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । लिथियम इयोन ब्याट्री मोबाइल फोनदेखि विद्युतीय गाडीमासमेत प्रयोगमा ल्याइन्छ । नोबेल पुस्कार पाउने मध्ये वैज्ञानिक गुडइनफ ९७ वर्षका छन्। उनी नोबेल पुरस्कार पाउने सबैभन्दा बढी अमेरिका व्यक्ति बनेका छन्। तीन वैज्ञानिकले नोबेल पुरस्कार बापत पाउने सात लाख ३८ हजार पाउण्ड स्ट्रर्लिङ्ग बाँड्ने छन्। रोयल स्वीडिस एकेडेमी...